विदेशमा कोरोना संक्रमित ९२ प्रतिशत नेपाली निको हुँदा कतिले गुमाए ज्यान ? - Korona Khabar
१८ आश्विन २०७७, आईतवार १३:४९
काठमाडाैं । नेपालमा काेराेना भाइरस (काेभिड-१९) संक्रमित बढीरहँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि संक्रमणबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपालमा शनिबारसम्म ८४ हजार ५७० जना संक्रमित भएका छन् भने ५२८ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ ।
निकाे हुनेकाे संख्या ६२ हजार ७४० रहेकाे छ भने सक्रिय संक्रमित २१ हजार ३०२ जना छन् । विदेशमा शनिबार साँझसम्म संक्रमित भएका नेपालीमध्ये ९२ प्रतिशत निकाे भएकाे गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएकाे छ । संघका अनुसार नेपाल बाहेक विश्वका विभिन्न ४२ देशमा ३९ हजार ५ सय २८ नेपाली संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये ३५ हजार ९१६ जना काेराेनामुक्त भइसकेका छन् ।
त्यस्तै विदेशमा काेराेना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने नेपालीकाे संख्या २ सय बढी छ । संघकाे स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सञ्जीव सापकोटाका अनुसार यो साता साउथ अफ्रिकामा रहेका १ जना नेपालीको ज्यान गएको छ । अहिलेसम्म नेपालबाहेक १८ देशमा रहेका २ सय ६६ जना नेपालीको काेराेना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ ।